अभिमान र स्वाभिमानको पातलो घेरा
२०७३ असार ३० गते को बेलुका ८ बजेतिरको घटनाले सायद सिंगो राष्ट्रको झझल्को दिन खोजेको हो कि भन्ने अनुभुती हुन्छ । ब्यक्तिको सक्तिले प्रदान गर्ने घमन्ड र अहंकार सबै सामु प्रस्ट देखिन सक्थ्यो । ड्युटी को दिन नभएर म आफ्नै धुनमा बसिरहेको थिए र अरु साथीहरुसँग बसेर खाँदै थिए । एउटा अपरिचित नम्बरबाट फोनको घन्टी बज्यो । " डाक्टर हैन तपाईं ? कहाँ हुनुहुन्छ?" शब्द र लवज सुन्दा ठाडो र अभिमानले भरिएको जस्तो प्रतित हुन्थ्यो । मेरो अनुमान पनि ठिकै रहेछ। कुनै बेला मन्त्रिको पि. ए. भएर काम गरेको हुनाले उसमा दम्भ चड्नु स्वाभाबिक थियो । " तपाईंले मलाई सिधै फोन गर्नु मिल्दैन । यो नम्बर कस्ले दियो तपाईंलाई ?ईमर्जेन्सी को स्टाफले फोन गर्नु पर्छ। मेरो ड्युटी पनि होइन । " कृयाको प्रतिक्रिय हुन्छ भनेजस्तै उसको ठाडो भाषाको जवाफ कटुताका साथ दिनु पनि स्थिती सापेक्छ्य देखिन्थ्यो । उसले आफ्नो परीचय दियो । मैले चिन्न सक्ने कुरै भएन । आफुलाई ठुलो मान्छे ठानेको लाई एउटा अस्पातलको डक्टरले चिन्न नसक्नु उस्को अहममा ठेस पुग्यो होला। त्यस्पछि धम्किका शब्दहरु प्रयोग गर्न थाल्यो । जागिरको धम्की देखी प्युठान मा बस्न मन भए नभएको देखि मिडियामा उचाल्दिने देखि हिसाबकिताब गरम्ला भन्ने जस्ता अवान्छित कुराहरु गरेर मेरो अपमान गरी आफ्नो सम्मान गुमायो।
अभिमानको र स्वाभिमानको बिचमा पातलो घेरा हुन्छ । त्यो घेरा नाघेको पत्तो हुँदैन । "म शक्तिमा भएको ब्यक्ती हुँ र म जे पनि गर्न सक्छु । " भन्नेहरुलाई शक्ती पनि सधैं उस्तै हुँदैन भन्ने आत्म्बोध हुँदैन। कसैले दिएको जागिर जस्तो गरी जागिर खाने धम्की एउटा कहलिएको पार्टीको ब्यक्तिबाट आउनु कत्तिको स्वाभाबिक हो ? सरकारी अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी सेवा गर्न भनेर आएको हुन्छ । आफ्नो जागिरको सिल्सिलामा जिल्लाभन्दा बाहिरबाट पनि आएको हुन्छ।जिल्लाको भित्रको ब्यक्ती हैन भनेर दमन गर्न खोज्नु कत्तिको सुहाउछ ! पाहुनालाई त सत्कार गरेर पो राखिन्छ । अपमान गर्ने र अनाबस्यक मानसिक प्रताडना दिन खोजे बस्ने कसैको इच्छा हुँदैन र त्यो ठाउको छबी धमिलिदै गएर कुख्यात हुन पुग्छ। अन्त्यमा घाटा त स्वय्म जिल्लालाई नै हुने हो । त्यो कालान्तरमा दिर्घायु असार पर्ने अबस्यम्भाबी हुन्छ । किनभने कटुता र तितोपनाको ईतिहास मेटिन निकै कठिन हुन्छ।
आफ्ना कार्यकर्तामा स्वाभिमानको खेती गर्न छोडेर अभिमानको रुखले हाङाबिङा हाल्दा पनि किन पार्टी मौन बस्छ? किन जनता मौन बस्छन ? एउटा कर्मचारीलाई धम्कीको भाषा बोलेर आफ्नो प्रभुत्व देखाउन खोजेको हो भने त्यो आफ्नो सम्मान गुमाउनु हो । दम्भका भरमा राजनीति कहिलै टिक्दैन । राजनीति त जनताको लागि हो । न कि एउटा दुइटा ब्यक्तिको अभिमान भरणपोशण गर्नका निम्ती ।
म जे पनि गर्न सक्छु र म पहुचवाला हो भन्नेले सकरात्मक् परिवर्तनका लागि काम गरे त मुलुक कायपलट नै हुन्थ्यो होला। तर यहाँको राजनैतीक शक्ती सरुवा भर्ती नियुक्ती अनि भोट्को राजनीतिमा सिमित भयो । यो शक्तिको प्रदर्शन र शक्तिले गर्दा उम्रिएको दम्भले एउटा कर्मनिस्ठ ब्यक्तिलाई सदैब निरुत्साहित गर्छ ,कुन्ठित बनाउछ। सबैसँग शक्ती नहुने भएर त्यो हुनु पनि काम गरेर देखाउने एउटा मौका हो । त्यसको दुरुपयोग् हुन थाल्यो भने तितो हुन्छ। सदुपयोग गरेमा प्रतिस्ठा हुन्छ। यति सानो कुरो बुझ्न पनि कती गार्हो भएको होला हगि ! दम्भले छेकेको आँखामा सौम्यताले स्थान पाओस भन्ने प्रार्थना गर्दछु ।
२०७३ असार ३० गते ९ बजे राति
भिडमा एक्लो बूढाबाजे ..."बा तपाईंको मुटुले गर्नुप...